Gangasagar - Sundarbans 7N Tour | Kolkata Tour ngwugwu
Usoro Ntugharị: 220 | Mmemme 07 nke ehihie
ỤBỌCHỊ 1: KOLKATA BỤ NA HALF DAY CITY TOUR
Mgbe ị bịarutere okporo ụzọ Howrah gaa n'ụlọ nkwari akụ. Mgbe ọ gbasasịrị, ọkara ụbọchị nleta obodo nke Victoria Memorial na Eden Garden stadium. N'abalị na Kolkata.
N'ụtụtụ mgbe ụtụtụ gachara Mayapur na-aga n'ụlọ nsọ Iskcon a ma ama. Gaa na Kolkata na n'abali.
Mgbe nri ụtụtụ na-aga Gangasagar. Mgbe ahụ gafere osimiri ma mee nlegharị anya nke Sagar Island. Mgbe ahụ laghachi na Kolkata na abalị.
Rịba ama maka njem Gangasagar:
Anyị ga-enye ụgbọala ụgbọala maka Kolkata ka Ferry Ghat dịka Lot No. 8 / Harwood Point (90 Km) ma laghachi na Kolkata. Mgbe ị gachara Lot No. 8, ị ga-ebu ụgbọ mmiri iji gafee osimiri Muri Ganga maka Kachuberia. Ma buru ugbo ala nke Sagar Island si Kachuberia. Ugbo ugbo na ugbo ala site na Kachuberia na Sagar Island na laghachi na nke aka gi.
DAY 4: ỤBỌCHỊ ỤBỌCHỊ KWỌKWỌ
Mgbe nri ụtụtụ gachara na Howrah Bridge, Belur Math, Dakshineswari Kali temple, Kalighat Kali temple, Museum Indian, Ụlọ Nne na Birla. N'abalị na Kolkata.
Kwa ụtụtụ mgbe nri ụtụtụ gụlitere na họtel ahụ ma daa na Priya Cinema. Mgbe ahụ, a ga-achụga gị na Gothakali. Mgbe ahụ gaa ụgbọ mmiri Tiger. N'abalị na Sundarban.
Mgbe Sundarban gachara nri ụtụtụ. N'abalị na Sudarban.
Mgbe nri ụtụtụ laghachiri na Priya Cinema complex. Mgbe ahụ ị ga-agbadata na nkwari akụ Kolkata. N'abalị na Kolkata.
Na-ehi ụra n'ehihie na ehihie na ọdụ ụgbọ elu / ọdụ ụgbọ okporo ígwè maka ịga njem.